Beeridda - Fuqing King Dnarmsa Spirulina Co., Ltd.
Iyada oo beero wanaagsan leh deegaan wanaagsan, waxaan soo saari karnaa alaab ceyriin oo wanaagsan oo aan soo saari karnaa alaab wanaagsan.
Beeraheena wax -soo -saarka waxay ka fog yihiin aagga magaalada. Ma jiraan warshado culus iyo beeraha agagaarka beeraha. Sidaa darteed, alaabtayada ayaa ka madax bannaan sunta cayayaanka, geedaha lagu dilo iyo sunta kale. Biyaha loo isticmaalo spirulina iyo chlorella ee beeraha ayaa ka yimaada dhulka hoostiisa, shaqaaluhu waxay tijaabiyaan biyaha dhulka hoostiisa dhowr jeer sanadkii si loo hubiyo in biyaha dhulka hoostiisa ay ka madhan yihiin wax wasakh ah. Waxaan ku samaynaa baadhitaannada spirulina iyo chlorella ee balliyada beerista taariikh kasta. Spirulina iyo chlorella ayaa caafimaad ahaan ku koray balliyada wax -soo -saarka, iyada oo aan lahayn algae aan la rabin. Isla mar ahaantaana, waxaan ku samaynnaa indho -indhaynta beeraha, waxaan ku tijaabineynaa qiimaha PH iyo OD qiimaha balli kasta, waxaanan ka dhignaa waddada ku habboon inay dib u soo celiso. Habkani wuxuu naga caawin karaa inaan soo goosanno spirulina iyo chlorella bislaaday waqtiga.
King Dnarmsa wuxuu dejiyay nidaam raad -raac tayo leh oo wax -ku -ool ah, laga bilaabo beerista abuurka algae, beerista algae, goosashada, dhaqidda, qallajinta, xirxirida, kaydinta, gaadiidka ilaa iibinta algae taasoo hubinaysa in alaabta aan ku siinno ay yihiin leh tayo wanaagsan.
Beeraha beerashada ayaa badiyaa ku yaal gobolka Hainan. Gobolka Hainan wuxuu ku yaal koonfurta koonfureed ee Shiinaha. Farqiga u dhexeeya heerkulka xagaaga iyo jiilaalka waa yar yahay. Celceliska heerkulka ayaa sarreeya. Saacadda qorraxdu waa 1780-2600 saacadood sannadkii. Shucaaca qoraxda waa 4500-5800 megajoule halkii mitir labajibbaaran. Roobabka sanadlaha ah waa 1500-2500mm. Cimilada gobolka Hainan ayaa aad ugu habboon beerashada spirulina iyo chlorella.